अल्ट्रासाउन्ड मेसीनको दुरुपयोग नगर्न स्वास्थ्यकर्मीलाई निर्देशन « Anumodan National Daily
अल्ट्रासाउन्ड मेसीनको दुरुपयोग नगर्न स्वास्थ्यकर्मीलाई निर्देशन
प्रकाशित मिति : २७ फाल्गुन २०७६, मंगलवार १४:३५
धनगढी । सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयले प्रदेशका ८८ वटा स्थानीय तहका १/१ जना स्वास्थ्यकर्मीलाई ग्रामीण अल्ट्रासाउन्ड सम्बन्धी तालिम दिएको छ ।
अल्ट्रासाउण्ड मेसिन चलाउन अनमी र स्टार्फ नर्सलाई २१ दिने तालिम दिइएको हो । सेती प्रादेशिक अस्पतालमा सञ्चालन भएको तालिम मंलगबार सम्पन्न भएको छ ।
प्रदेशका ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरुले आफ्नो गर्भाअवस्थाको बारेको जानकारी नपाएकै कारण अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्ने बाध्यतालाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश सरकारको सामाजिक मन्त्रालयले ८८ वटा अल्ट्रासाउण्ड मेसिन खरिद गरेर स्वास्थ्य चौकीलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।
तालिममा सहभागी स्वास्थ्यकर्मीहरुले तालिम पश्चात् ग्रामीण क्षेत्रका बच्चा र आमाको मृत्युदरमा कमी आउने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
समाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदीले तालिमको समापन समारोहमा बोल्दै अल्ट्रासाउन्ड मेसीनको दुरुपयोग नर्गन स्वास्थ्यकर्मीलाई आग्रह गरे । उनले गर्वभती अवस्थामा बच्चाको लिङ्ग पहिचान गर्न कानुनले बन्देज लगाएको भन्दै यस्ता कार्य नर्गन निर्देशन दिए । उनले अल्ट्रासाउन्ड मेसीन गाँउगाँमा पुगेकोले सुदूरपश्चिमका ग्रामीण भेगमा महिलाहरुले घरमै स्वास्थ्य सेवा पाउने बताए । भौगोलिक रुपमा विकट भएपनि स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सेवा प्रवाहमा आनाकानी नर्गन पनि उनले स्वास्थ्यकर्मीलाई आग्रह गरे ।
यस्तै सो कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व सामाजिक विकासमन्त्री तथा प्रदेश सासंद दीर्घ सोडारीले विकासको दृष्टीकोणले पछाडि पारिएको सुदूरपश्चिम स्वास्थ्यका सवालमा सबै प्रदेशभन्दा अगाडि रहेको बताए । विगतमा ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरुले स्वास्थ्य सेवा नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था थियो, उनले भने–‘अब त्यस्तो समस्या छैनन् यसमा स्वास्थ्यकर्मीहरुको महत्वपुर्ण योगदान छ ।’
कार्यक्रममा स्वास्थ्य निर्देशनालय दिपायलका निर्देशक डा. गुणराज अवस्थीले अहिले आमा र बच्चा बचाउने अवस्थामा सुदूरपश्चिम प्रदेश अगाडि बढेको बताए । उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ वटा स्थानिय तहमा अल्ट्रासाउन्ड सेवाको पहुँच पु¥याउन प्रत्येक पालिकाका एकएक स्थानीय तहलाई एउटा मेसीन हस्तान्तरण गरेको बताए । यस्तै चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तभित्र सुदूरपश्चिमका ४२० वटै स्वास्थ्य चौकीमा अल्ट्रासाउन्ड सेवा पु¥याउने डाक्टर अवस्थीले प्रतिवद्धता जनाए ।
सबै स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई प्रत्येक महिना रिपोर्ट पेश गर्न र संख्यात्मक र गुणात्मक काम गर्न निर्देशन दिए । उनले बेलाबेलामा पुनः तालिम प्रदान गर्ने बताए ।
कार्यक्रममा सेती प्रादेशीक अस्पतालमा मेसु डा. शेरबहादुर कमरले कुनै प्रदेशमा नभएको काम सुदूरपश्चिमले सुरुवात गरेको भन्दै प्रसंसा गरे । उनले विगतमा आफूले अल्ट्रासाउन्ड मेसीन चलाउन तालिम नपाएर युटूब हेरर काम गरेको अनुभव सुनाउदै सबै स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सीपको सदूपयोग गर्न आग्रह गरे । अल्ट्रासाउन्ड मेसीन सञ्चालनको लागि ग्रामिण स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई दिएको २१ दिने तालिममा धेरै कुराहरु सिकाएको प्रशिक्षक डा.मिनमार शेर्पाले बताए । उनले बिषेश गरेर गर्भवती महिलाहरुको अवस्था जाचँ गरेर समयमै अस्पताल रिफर गर्न सिकाएको बताए । यस्तै स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई बच्चाको लिङ्ग पहिचान गर्न कानुन सम्मत नभएको र जााच गर्न पनि नसिकाएको बताए ।
अल्ट्रासाउन्ड मेसीन सञ्चालनको तालिम प्राप्त गरिसकेपछि स्वास्थ्य चौकीमै बच्चा उल्टो छ की सुल्टो भनेर पत्ता लगाउन सक्ने स्वास्थ्य कार्यालय अछाममा कार्यरत अनमी माया स्वाँरले बताइन् । कतिपय अवस्थामा महिलाको पाठेघर भन्दा तल नै बच्चा बसेको हुन्छ यदी यो अवस्था सुरुमै पत्ता लगाउन सके महिलाको ज्यान जोगाउन सकिने उनले बताइन् ।
बच्चा बसेर फुटेर कतिपय महिलाहरुको अकालमै ज्याने अवस्थाको पनि अन्त्य हुने उनको भनाई छ ।
ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरुले आफनो अवस्था थाहा नपाएर अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने टाँटे स्वास्थ्य चौकी बाजुरामा कार्यरत अनमी मंगला बोहराले बताइन् । आफूले अल्ट्रासान्ड मेसीन प्राप्त गरिसकेपछि समयकै गर्भवती महीलाको स्वास्थ्य अवस्था पत्ता लगाएर रिफर गरेर आमा र बच्चाको ज्यान बचाउन सहयोग पुग्ने बताइन् ।
विगतमा गर्भाअवस्थाको ९ महिनासम्म पनि आफ्नो पेटमा बच्चा कस्तो अवस्थामा छ भनेर महिलाहरुलाई थाहा नभएकै कारण अधिकाशं बच्चा र आमाले ज्यान गुमाउने गरेको स्टार्फ नर्स सम्झना सिहंले बताइन् । उनले ग्रामीण क्षेत्रमा हुने नवजात शिशुको मृत्युदर र गर्वभती आमाको मृत्युदर घटाउन अल्ट्रासाउन्ड मेसीनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताइन् ।
१२ करोड ३२ लाख बजेटमा अल्ट्रासाउन्ड मेसीन खरिद गरेर सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतको स्वास्थ्य निर्देशनालयले ८८ वटा पालिकाहरुलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।